सिरहा बस दुर्घटनामा ठाकुरको मृत्यु ४० भन्दा बढी घाइते
१५५८ पटक पढिएको
गोलबजार सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. २ मा पर्ने कमला नदीको पुल नजिक भखर्रै भएको बस दुर्घटनामा १ को मृत्यु भएको छ भने ४० भन्दा बढी घाईते भएका छन् ।
पश्चिमबाट पूर्व तिर आउदै गरेको ना.४ख ४८२५ नं. पृथ्वी यातायात र पूर्वबाट पश्चिम तर्पm गैइ रहेको वा.४ख ३९४० नं. मिनि टरक एक आपसमा ठोकिदा उक्त घटना भएको छ । उक्त घटनामा परी सरर्लाही हरीपुरको करीब उमेर ४५ हरिपुर नगरपालिका जगदीस ठाकुरको मृत्यु भएको छ । भने घाईते सबैले उपचार फुलकुमारी महतो मेमोरीयल अस्पताल कर्जन्हामा भई रहेको र सथै ३ जना थप उपचारका लागि विराटनगर न्युरो अस्पताल लागेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी नायब उपरिक्षक सुकदेव खनालले जानकारी दिनु भएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी नायब उपरिक्षक डिएसपी सुकदेव खनालले आपैm उद्यार कार्यामा लागेका छन् । दुर्घटना बारे थप विवरण आउन बाकी रहेको छ ।